Harkaa fi harma muraa Aanolee - Wikipedia
Harkaa fi harma muraa Aanolee
Harma Muraa fi Harka Muraan Aanolee yakka sukkanneessaa Minilik ummata Oromoo Arsii irratti raawwatedha. Ummata Oromoo Arsii bakkaa Aanolee jedhamutti walitti qabuun dhiira irraa harka mirgaa dubartiirraa ammoo harma muruun gocha suukanneessaa kana irratti raawwate. Kanas kan raawwate ajajaa gita bittaa Arsii godhuun kan Minilik ramade Raas Daargee ture.
Ajaajaan waraanaa Minilik, ummata Arsii nagaa fi araara dubbannaa koottaa jedhee Aanoleetti akka walga'an waamee. Ummannis nagaa buusuf jecha yaa'ee walitti qabame. Yeroo kana, karaa dhiphoo keessa nama tokko tokkoon akka darban itti himane. Yeroo namoonni karaa dhiphoo kana keessa darbu achitti qabuudhan, warra dhiiraarraa harka mirgaa muranii morma isaanitti fannisanii gad lakkisani. Dubartootarraa ammoo harma muranii mormatti rarraasan. Namoonni guyyaa sana achitti walitti qabaman tilmaaman yoo xiqqaate hanga nama kuma tokkoo yoo ta'an barreessitoonni tokko tokko hanga kumaa sadi'iillee baayyachuu danda'u jedhu. Ummanni nagaa dubbachuuf waan dhaqeef, ofirraa ittisuufillee meeshaa waraanaa hin qaban turan.
Gocha kana warri Abashootaa kan raawwataniif, ummata Arsii haaloo ba'uufi salphisuu fi. Ummanni Arsii Lenjisoo Diigaan durfamuun waggaa saddeetiif loltoota Minilik moo'ee waan deebiseef kana haaloo ba'uuf godhan. Kana qofa odoo hin taane ummanni sodaatee akka isaanif buluu gochuuf ture.
Abbas H. Ganamo (2014) Conquest and Resistance in the Ethiopian Empire, 1880 -1974: The Case of the Arsi Oromo
AANOLEE: A TRAGEDY ON WHICH ETHIOPIAN SOURCES ARE SILENT, dhumarratti kan baname: Ebla 13, 2015
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Harkaa_fi_harma_muraa_Aanolee&oldid=33329" irraa kan fudhatame
Akaakuu expanded collapsed
dabalata expanded collapsed
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 14 Fulbaana 2020, sa'aa 18:23 irratti.